स्टाफसँग गरिएको अन्तर्वार्ता (भियतनामबाट बसाइँसराइ)｜B.T जी, उमेर: २० वर्ष माथि｜7-Eleven
B.T जी / काम गरेको साढे २ वर्ष भयो
विवाह गरेपछि जापानमा आएँ!7-Eleven ले गर्दा जापान मन पर्‍यो!
जापानी श्रीमान हुनुहुने B.T जीले जापानमा आएको पहिलो महिनामा 7-Eleven मा काम गर्न सुरु गर्नुभयो। जापानी भाषा बोल्ने नआउँदै पार्ट टाइम सुरु गर्नुभयो तर अहिले त पसल र 7-Eleven दुबैमा बानी भइसकेकोले हरेक दिन सन्तोषजनक जीवन बिताइरहनु भएको छ रे।
B.T जीको परिचय
भियतनाममा जन्मेर भियतनाममै हुर्केको। ट्रेडिङ कम्पनीमा काम गर्ने श्रीमान कामको सिलसिलामा भियतनाममा बसेको बेला उहाँहरूको भेट भएको हो रे। विवाह पछि ८ महिना भियतनाममा बसोबास गरी, श्रीमानको भियतनामको काम सिद्धिए लगत्तै जापानमा आउनुभयो। जापानमा आएको झण्डै साढे २ वर्ष भयो।
विदेशमा एक्लै बस्दा एक्लो महसुस हुन्छ...। अन्तर्वार्तामा एउटा घटना पनि घटेको थियो। STORY.01
भियतनाममा जन्मेको हुनाले, जापानमा आउनु अगाडिसम्म जापान सम्बन्धी खासै केही पनि थाहा थिएन तर जापानमा बसोबास गर्ने दिन रमाइलो मानेर पर्खिरहेको थिएँ। तर जापानमा आउने बित्तिकै चिनेको मान्छे कोही पनि थिएन। दिउँसो घरमा एक्लै......। एक्लै कतै जाऊ भने पनि, बाटो पनि, भाषा पनि, बाटोको चिन्ह पढ्ने तरिका पनि, नजानेको हुनाले बाहिर निस्कन पनि सकिनँ। त्यस्तो जीवन एक महिना पनि सहन सकिनँ।
त्यसैले “नजिकै काम गर्छु!” भन्ने सोचेर, इन्टरनेटमा नजिकको कम्बिनीमा आवेदन दिई अन्तर्वार्ताको लागि गएँ। ......त्यस्तो योजना थियो तर अन्तर्वार्ता दिन गएको पसल त मैले आवेदन दिएको पसल होइन रहेछ। अर्कै पसलमा गएछु। “हामीलाई स्टाफ चाहिएको त छैन, किन आएको होला!?” जस्तो लागेर पसल म्यानेजर अचम्ममा पर्नुभएको थियो रे।
त्यो बेला एकदम कम मात्र जापानी भाषा जानेको थिएँ। तर जसरी भएपनि “म मेहनत गर्छु” चाहिँ भन्न मन लागेकोले, मैले धेरै पटक “मेहनत गर्छु!” भनेर जापानी भाषामा भनेको कुरा अहिले पनि याद छ।
त्यसको नतिजा, पार्ट टाइम स्टाफको रूपमा काम पाएँ। त्यतिखेर मेरो आवेदन स्वीकार्नुभएकाे पसल म्यानेजरसँग साँच्चै नै कृतज्ञ छु! अन्तर्वार्तामा भने जस्तै गरी हरेक दिन मेहनत गरेर काम गरिरहेको छु।
व्यस्त बेला गाह्रो हुन्छ! तर “अझ मेहनत गर्नुपर्छ” जस्तो लागिरहेको छ! STORY.02
अहिले १२:३० देखि बेलुकाको ५, ६ बजेसम्मको सिफ्टमा, एक दिनमा ४ देखि ५ घण्टा जति काम गरिरहेको छु। ग्राहक धेरै भएको बेला साँच्चै नै व्यस्त भइन्छ, कहिलेकाहीँ अात्तिन्छु पनि।
विशेष गरी सुरु-सुरुमा ग्राहकलाई सेवा दिँदाखेरि ग्राहकले प्रश्न सोधेको बेला डरले मुटु ढुकढुक गरिरहन्थ्यो। तर अहिले जापान, जापानी भाषा, काम, सबैको बानी परिसकेकोले काममा आउन रमाइलो लाग्छ। सबै कामहरू मध्ये “रजिष्टरको रकम जाँच” गर्ने काम विशेष मन पर्छ! म पैसाको हिसाब गर्न सिपालु छु। हिसाब मिलेन भने तुरुन्तै पसल म्यानेजरलाई रिपोर्ट गर्छु! पसल म्यानेजर पनि ममा भर पर्ने हुनाले, अझ धेरै मेहनत गर्न मन लाग्छ! हालसालै सामान अर्डर गर्ने काम पनि जिम्मा दिन थाल्नुभएको छ।
साथै कहिलेकाहीँ नयाँ स्टाफलाई सिकाउने पनि गर्छु। अलिअलि गर्दै गर्न सक्ने कामहरू बढ्दै जान्छ। जापानी भाषाको पढाइ पनि त्यस्तै हो! अझ अध्ययन गरेर “दैनिक उपभोग्य सामान (उपभोग म्याद भएको सामान)” अर्डर गर्न सक्ने हुन चाहन्छु!
त्यसपछि, ग्राहकले “मेहनत गर्नुहोस् है”, “तपाईं कहाँबाट आउनुभएको?” भनेर सोध्नुभयो भने खुसी लाग्छ। जापानमा दयालु ग्राहकहरू धेरै हुनुहुन्छ। त्यस्तो ग्राहकहरूको लागि “अझ मेहनत गरेर काम गर्ने” जाँगर चल्छ।
7-Eleven ले गर्दा हरेक दिन सन्तोषजनक जीवन बिताइरहेको छु! पसल पनि जापान पनि, झन झन मन पर्छ! STORY.03
जापानमा गरेको सबैभन्दा ठूलो कुरा सवारी साधन अनुमति पत्रको प्राप्ती हो। जापानी भाषा चुनौतीपूर्ण भएर धेरै दु:ख गर्नु पर्‍यो। बिहानको समय सवारी साधन प्रशिक्षण केन्द्रमा गई, दिउँसोदेखि बेलुकासम्म पार्ट टाइम गरेर घर फर्केर घरको काम सिध्याएर लिखित जाँचको अध्ययन गर्नु पर्थ्यो। हरेक दिन पढेको पढेकै गर्ने गर्थें। त्यति धेरै मेहनत गरेको भएर सवारी साधन अनुमति पत्र पाएको बेलामा विशेष खुसी लागेको थियो।
免अनुमति पत्र लिनको लागि पनि पसल म्यानेजरले मद्दत गरिदिनुभएकोले उहाँसँग कृतज्ञ छु। लचिलो तरिकाले सिफ्ट बनाइदिने, लिखित जाँचबारे सिकाइदिने आदि गरी कामको कुरामा पनि काम बाहेकको कुरामा पनि सहयोग गरिदिनुभयो।
अहिलेको लक्ष्य जापानी भाषा प्रवीणता परीक्षा (JLPT) मा उत्तीर्ण हुनु हो! त्यसपछि जापानी खानेकुरा खान सक्ने हुनु हो। जापानी खानेकुराको स्वाद गुलियो, पिरो, तितो आदि थरीथरी हुने हुनाले खानु अगाडि जहिले पनि “कस्तो स्वाद होला” जस्तो लागेर ढुकढुक हुन्छ (हाँसो)।
तर 7-Eleven को सामान भण्डारणबाट निकाल्दा बेन्तो, पाउरोटी, साइड डिस आदि सबै मीठो देखिन्छ र पटक-पटक निस्किने नयाँ सामानहरू हेर्न मन लाग्छ। आउने दिनहरूमा पनि विभिन्न कुराहरू सिकेर जापान र कामबारे अझ धेरै जान्न मन छ।
पसल ओनरको कमेन्ट पसल ओनर भएर हेर्दा B.T जी मा कस्ता गुणहरू देख्नुहुन्छ?
B.T जी साँच्चै नै इमानदारीताका साथ अध्ययन गर्ने मेहनती हुनुहुन्छ। २ वर्ष अगाडि आवेदन दिएको बेला अलिअलि बाहेक जापानी भाषा बोल्न सक्नुहुँदैनथ्यो। अन्तर्वार्तामा निरन्तर “मेहनत गर्छु” मात्र भनेको भनेकै गर्नुभएको थियो। तैपनि उहाँको काम गर्ने चाह देखेर कामको लागि लिएँ। त्यस्तो मान्छे, अहिले जापानी भाषा त भन्नै परेन, 7-Eleven को सबै काम सिकी, नयाँ जापानी स्टाफलाई पनि सिकाउन भइसक्नुभयो। अचम्मको प्रगति गर्नुभएको छ।